करिश्मा पार्टी प्रवेश, त्यो पार्टी पत्तासाफ! – Yug Aahwan Daily
युग संवाददाता । १० जेष्ठ २०७९, मंगलवार ०८:०१ मा प्रकाशित
काठमाडौं । स्थानीय तह २०७९ निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा नायिका करिश्मा मानन्धर एमाले प्रवेश गरिन् । पार्टीका उम्मेदवारलाई जिताउन उनी घरदैलो अभियानमा लागिन् । विभिन्न जिल्लामा पुगेर एमालेका उम्मेदवारका लागि भोट मागिन्।
कलाकारितासँगै ०७२ सालमा डा. बाबुराम भट्टराईले गठन गरेको नयाँ शक्ति पार्टीमा करिश्मालाई केन्द्रीय नेता बनाइएको थियो ।